Kuzoqina amatomu manje kwiKaizer Chiefs - Impempe
Kuzoqina amatomu manje kwiKaizer Chiefs
Njengoba seyisalelwe yimidlalo eyisishiyagalolunye iqede ngesizini engenye yanzima iKaizer Chiefs esike yabhekana nawo, umqeqeshi uGavin Hunt uthi sekumele aqine amatomu.
Amakhosi kumanje asendaweni ka-10, kanti asaqoqe amaphuzu angu-25 emdlalweni engu-21. Sekucacile ke nokho ukuthi Amakhosi ngeke esakwazi ukungena embangweni wesicoco, yingakho uHunt eselibekele ukuqeda endaweni yesihlanu okungenani leli qembu lakhe.
“Kumele siqale sinonkele size sifike emaqenjini amahlanu aphezulu. Ngikholwa wukuthi singakwenza lokho – akukho ukungabaza lokho” kusho uHunt.
Amakhosi azobhekana neCape Town City eFNB Stadium emdlalweni weDStv Premiership ngoLwesithathu ntambama, nokuwumdlalo uHunt afisa baqale ngawo ukunombela kwabo.
“Kudingeka siqale ngoLwesithathu uma sesibhekene neCape Town City. Bangelinye lamaqembu aphambili kwiligi kule sizini, kodwa kumele siwenze umsebenzi,” kuqhuba lo mqeqeshi owaqeda indlala yeminyaka engaphezu kuka-90 yesicoco seligi kwiBidvest Wits.
Amakhosi aseke aba nekhefu kanti ulujabulelele uHunt kwazise isikhathi sokuzilolonga sincane kakhulu kule sizini ngenxa yokuthothelana kwemidlalo.
“Leli khefu ngelide esizoba nalo kuze kuphele isizini. Lezi zinsuku ezinhlanu esibe nazo besigxile ekucijeni izingqondo kunokulolonga imizimba. Sinikeze nabadlali ikhefu.
“Ukusuka lapho akusamiwa ngoba sizoba nomdlalo cishe njalo ngemuva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu. Sisalelwe yimidlalo esiyishiyagalolunye manje,” kuchaza yena.
NgeCitizens, abayishaya emdlalweni womzuliswano wokuqala, iHunt uthi kuzomele bazibambe ziqine kwazise ayilula neze.
“Ngesikhathi sidlala nabo eKapa ngoJanuwari, sakora amagoli amabili asheshayo kodwa sabe sesiyeka ukubacindezela, sabapha ibhola kalula.
“Saxegisa. Kodwa ekugcineni sawina. Nokho kwasekuvalwe amehlo ngasekugcineni.
“Kumele sizame ukubamba umgqigqo. Uma ubheka la besikhona, bese ubuka la sikhona manje ngibona sengathi sesingconywana. Singakhuluma kushone ilanga, kodwa okubalulekile imiphumela,” kuphetha uHunt.
Previous Previous post: Imali ibuyisele uHeric kwiChippa, phela ayiluthezi olumanzi
Next Next post: Seliwelile iBhakhaniya kwiConfederation Cup